Nakatonin'ny Vondron Eropeana tamin'ny fomba ofisialy ny sehatry ny seranam-piaramanidina Belarosiana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Nakatonin'ny Vondron Eropeana tamin'ny fomba ofisialy ny sehatry ny seranam-piaramanidina Belarosiana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Belarus • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nanapa-kevitra ny Vaomiera eropeana androany fa hanamafy ny fepetra fameperana efa misy manoloana ny toe-draharaha any Belarus amin'ny alàlan'ny fampidirana fandrarana ny firongatry ny habakabaka eropeana sy ny fidirana amin'ny seranam-piaramanidina eropean'ireo mpitatitra belarosiana isan-karazany.
Ny filankevitra eropeana dia nanambara ny fandrarana lamba firakotra amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka belarosiana
Ny mpikambana ao amin'ny vondrona eropeana dia takiana mba handà ny fahazoan-dàlana hiditra, hanala na hihoatra ny faritany misy azy amin'izay fiaramanidina ampiasain'ny mpitatitra fiaramanidina belarosiana.
Ny fandraràna ny vondrona eropeana dia nitranga taorian'ny fisamborana an-keriny ny sidina Ryanair
Ny fanjakana mpikambana ao amin'ny Vondron Eropeana dia nametraka fandrarana lamba firakotra ho an'ireo mpitatitra rivotra Belarosiana rehetra hiditra amin'ny habakabaka EU. Ny fandrarana tanteraka dia nateraky ny fisamboran'ny mpikatroka mpanohitra natao sesitany Romana Protasevich avy amn'ny mpitondra fitondrana Belarus. Ryanair sidina nitondra azy dia nogiazana ary voatery nidina tany Minsk tamin'ny 23 Mey.
Ny filankevitra eropeana dia nanambara fanapahan-kevitra momba ny fandraràna lamba firakotra androany, taorian'ny fifampidinihana teo amin'ireo diplaomaty ambony eropeana.
vondrona Eraopeanina ireo firenena mpikambana dia “takiana handà ny fahazoan-dàlana hiditra, hivoaka na hanongotra ny faritanin'izy ireo amin'izay fiaramanidina ampiasain'ny mpitatitra fiaramanidina belarosiana.”
Misy fiantraikany amin'ny mpandraharaha izay mivarotra seza amin'ny fiaramanidina ampiasain'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa koa ny fandrarana, ary hanan-kery amin'ny misasakalina (22:00 GMT), amin'io andro io ihany.
Ny fandraràna eropeana rehetra dia nitranga roa andro taorian'ny nanaovan'ny Vondrona Eropeana fiarovana ny fiaramanidina fiaramanidina (EASA) ny 'tolo-keviny' mba hisorohana ireo mpitatitra avy ao amin'ny bloc Belarus ho fandrarana tanteraka. Ny EASA dia namoaka "Toro lalana fiarovana" milaza fa tsy tokony misy zotram-piaramanidina eropeana miditra amin'ny habakabaka belarosiana raha tsy amin'ny fotoana maika.
Ny fanodinkodinam-bola tamin'ny fiaramanidina Ryanair 23 May dia nandefa onjam-peo mitohy tamin'ny alàlan'ny indostrian'ny fizahan-tany iraisampirenena. Ilay fiaramanidina, niainga avy tany Greece nankany Lithuania, dia nisy naka an-keriny ary voatery nidina tany Minsk noho ny fandrahonana tamin'ny baomba goavambe. Tsy ilaina intsony ny milaza fa tsy nisy baomba hita tao an-tsambo, raha ny fiaviany sy ny fotoanan'ny 'hafatra fampitandremana' kosa dia mazava tsara amin'ny 'hetsika manokana' nataon'ny Belarus KGB.
Vantany vao nidina an-tery tao amin'ny seranam-piaramanidina Minsk, dia niditra tao amin'ny fiaramanidina ny mpiambina belarosiana ary nisambotra an'i Protasevich notadiavin'ny fitondrana Lukashenko sy ny sakaizany, teratany rosiana Sofia Sapega.